အနာဂတ်အတွက် ငွေစုဆောင်းဖို့ အရေးကြီးတဲ့ စည်းမျဉ်းများ
ဘာလို့ ငွေစုဆောင်းကြတာလဲ? ယေဘုယျအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အနာဂတ် ငွေကြေးအခြေအနေကို မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ရှည်လများ စုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေဟာ သင့်ရဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုကို ခိုင်မာလုံခြုံမှုရှိစေပြီး အရေးပေါ် ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲတွေကနေ လွတ်မြောက်စေနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီတော့ နောင်ရေးအတွက် စနစ်တကျ ကြိုတင် ငွေစုဆောင်းဖို့ လိုပြီပေါ့။ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ စာဖတ်ပရိတ်တွေအတွက်အလွယ်တကူငွေစုဆောင်းနိုင်မယ့် နည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁) အသုံးစရိတ်တွေကို မှတ်သားပါ
ပြီးတော့ ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ ငွေ သုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကို အမြဲမှတ်သားထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဘတ်စ်ကားခ၊ ကော်ဖီဖိုး၊ ဆံပင်ညှပ်ခက အစရေးမှတ်ထားဖို့ပါ။ အသုံးစရိတ်တွေကို ရေးမှတ်တဲ့အခါ စားသောက်စရိတ်၊ အိမ်စရိတ်၊ သာရေးနာရေး စတဲ့ အုပ်စုလေးတွေခွဲပြီး မှတ်သားထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
၂) ငွေစုမယ့် ပမာဏ သတ်မှတ်ပါ
၃) မလိုအပ်ဘဲ ငွေသုံးတာကို လျှော့ပါ။
ပိုက်ဆံစုဖို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ပန်းတိုင် သေချာသတ်မှတ်ပြီး စုဆောင်းတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ လက်ထပ်ဖို့၊ အိမ်ဝယ်ဖို့၊ ကားဝယ်ဖို့၊ ခရီးထွက်ဖို့ စသဖြင့်ပေါ့။ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး ငွေစုတဲ့အခါ မှန်မှန် စုဆောင်းမှာ ဖြစ်သလို မြန်မြန်လည်း ကိုယ်မှန်းထားတဲ့ ပမာဏပြည့်မြောက်နိုင်လို့ပါ။ နှစ်တိုလား? နှစ်ရှည်လား? ခွဲခြားပြီး စုဆောင်းနိုင်သလို ကိုယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏရောက်တဲ့အထိလင်္ညး ရည်မှန်းပြီး စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။